Qt inoshandura modhi yerezinesi yekuburitswa kweLTS | Linux Vakapindwa muropa
Qt inoshandura modhi yerezinesi yekuburitswa kweLTS
Pane iyo Qt blog, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika Petteri Holländer anozivisa kuti kwenguva refu rutsigiro edition yeQt inongowanikwa chete mune marezinesi ebhizinesi. Izvo zvinoshandawo kune isipo yekumisikidza.
Qt Kambani yazivisa shanduko mune yayo rezinesi modhi yeiyo Qt mamiriro, ayo inogona kuve nemhedzisiro yakakosha munharaunda nekuparadzirwa vanoshandisa Qt. Sezvo seyeshanduro 5.15, QTS LTS matavi anotsigirwa kudzamara kuumbwa kwechinotevera chakakosha vhezheni, ndiko kuti, ingangoita hafu yegore (zvinyorwa zveLTS shanduro zvinoburitswa kwemakore matatu).
Zvinoenderana naPetteri Holländer:
"Shanduko dzinotanga neshanduro 5.15 LTS. Uye zvakare, kumisikidzwa kwemafaira emabhinari kuchada Qt account mune ramangwana uye iyi shanduko nyowani inofanira kuiswa pasati papfuura Kukadzi "
Iine account yemushandisi, Qt Boka, iyo iri yekambani yeGigia, inoda kuona kuti vashandisi vanoshandisa masevhisi anopiwa kuburikidza nayo.
Uyewo, zvinoenderana naHolländer, the vhura sosi vashandisi kunyanya inofanirwa pamwe neshanduko iyi kunatsiridza chigadzirwa QtPamwe kuburikidza nemabhugi, mishumo yekodhi, kana maforamu maforamu. Panguva imwecheteyo, iyo Qt account zvakare inovhura nzira inoenda kuQt Musika, uko plugins dzinochinjana, pakati pezvimwe zvinhu.
Iyi nhanho inofanirwa kumhanyisa kuunzwa kweshanduro nyowani dzeQT uye ichawedzera zvakanyanya huwandu hwemakambani anoshandisa rezinesi Qt rezinesi, mutengo waro uri $ 5508 pagore pamusimudziri (nepo kutanga uye mabhizinesi madiki - $ 499 pagore).
Shanduko yeiyo LTS vhezheni kukanganisa nzanga yakavhurika sosi kubvira kana uchishandisa shanduko iyi, ivo vanongowana kuburitswa kwenhamba kusvikira inotevera diki vhezheni yaonekwa.
Kutanga muna Kukadzi, munhu wese, kusanganisira yakavhurika sosi Qt vashandisi, zvinoda zvinoshanda Qt maakaunzi kurodha Qt mabhinari mapakeji. Isu takachinja izvi nekuti tinotenda kuti Qt account inokutendera kuti ushandise zvakanaka masevhisi edu uye ubatsire kuQt seyakavhurika sosi mushandisi.
Tinoda vashandisi vepachena kuti vabatsire kunatsiridza Qt neimwe nzira kana imwe, kungave kuburikidza nemishumo yebug, maforamu, kuongororwa kwekodhi, kana zvimwe zvakadaro. Parizvino, ivo vanongogona kuwanikwa chete kubva kuQt account, saka kuve neyayo ichave inosungirwa.
Ndichiri kune rimwe divi ivo vanogadzira LTS kugoverwa (kureva nguva yakareba yekutsigirwa) senge RHEL, Debian, Ubuntu, Linux Mint, SUSE pakati pevamwe.
Vachamanikidzwa ku tumira shanduro dzekare zviri pamutemo hazvitsigirwe, port bug uye kushomeka kunogadzirisa wega kana kugara uchivandudza kune matsva akakosha mavhezheni eQt, izvo zvisingaite sezvo zvichikonzera matambudziko asingafanoonekwi mukushandisa kweQt yakapihwa mukuparadzira.
Zvichida nharaunda ichabatana kuronga rutsigiro rwemhando yavo yeQt LTS, vakazvimiririra Qt Kambani.
Kugadziridza padivi mutemo wekupa marezinesi kunodzikisira chokwadi chekuti Qt Kambani yakavimbisa kuita zvese zvinogadziriswa kuburikidza neruzhinji runyorwa panogadzirwa Qt.
Iwo maratidziro achawedzerwa kubazi rekuvandudza uye oendeswa kumatavi neshanduro dzichangoburwa solid, inozorerutsa kuburitsa kwavo kuendesa kune kugovera.
Uye zvakare, iwo maLTS vhezheni ayo Qt Kambani inotakura zvigadziriso ichave mashoma.
Zvinosuruvarisa, shanduko yemitemo maererano neQt havana kuganhurirwa mukuchinja rezinesi uye kubva muna Kukadzi, Chero ani anoda kushandisa QT anofanirwa kunyoresa account mune sevhisi Qt Akaunti kurodha pasi mafaira eQt mabhaisikopo.
Iyi nhanho inotsanangurwa nechishuwo chekurerutsa kugoverwa kwefaira uye kuona kubatana pamwe neQt Musika.
Kuwanika kweJira's bug tracking system, kuongorora interface, uye maforamu anodawo account yeQt, nepo budiriro uye modhi manejimendi manejimendi ichiri yakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Qt inoshandura modhi yerezinesi yekuburitswa kweLTS
Pandaiverenga ndanga ndichinetseka kuti izvi zvese zvinoshandurirei, nekuti Debian nevamwe vanotumira ne KDE kwete LTS kune izvo zvigamba zviri kuiswa. Ini handinyatsonzwisisa kuti Qt ichagadziriswa sei kuburikidza neaccount isiri yekuita mari hurongwa hwekuvandudza. Ndinofanira kuverenga zvakare uye ndione kuti nharaunda inoita sei. Hazvinzwika senge nhau dzakanaka. Pakati pe systemd neQt pane akawanda uye akawanda mapoinzi ekuenda kuBSD. : /
Uye chii chichava hanzvadzi mapurojekiti senge LXQt kufunga ...
Ini ndinozviona kubva pakuona kwekupa kunharaunda, kunyange hazvo chokwadi chekuti iye zvino musimudziri akazvimiririra anenge achifanira kubhadhara rezinesi, haaendi ikoko.
Zvakanaka, ikozvino kumanikidza vanogadzira ekuparadzira kuti vabatsire mukuvandudzwa kweQT chimwe chinhu chaifanirwa kuitwa kwenguva yakareba. Zvakanaka, pakupera kwezuva ivo vari kushandisa basa iro vanhu vakati wandei vanofanirwa kubhadhara mari kuti irambe iri pamusoro.
Uye chikamu ichi hachina kushata, nekuti mupiro wekuchengetedza zvaunoshandisa uye zvinobatsirawo kubhadharira chirongwa chako. Sezvo kugoverwa kukuru senge Debía, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Linux Mint, pakati pevamwe. Gamuchira mari kungave nemipiro kana nekusanganisira zvigadzirwa zvinovatsigira.
Uye kana kugoverwa uku kuchipa nemipiro kumapurojekiti aya chinhu uye chakaparadzaniswa, kuti vanofanira kusangana, nekuti vachati "Ok, handisi kuronga kubhadhara chinzvimbo chekuvandudza chigadzirwa chako, asi isu ndinokutumira mipiro kuti uchinje pazviri ”.
Izvi ndizvo zvazviri neWebOS, ayo matsva ekuvandudza masisitimu emagetsi indasitiri pakati pevamwe.
Parizvino zvakanaka, asi sezvandakambotaura pakutanga zvichikanganisa vanozvimiririra ...
Ivo vanofanirwa kushandura izvo zvinotarisisa uye vozvidzorera munzira iyo munhu wese aine kuhwina-kuhwina.
KDE ichafanirwa kuenda kuGTK !!! ? Izvo zvingave zvirinani, chaizvo.
«» Nepo kune rimwe divi vagadziri veLTS kugoverwa (ndiko kuti vaine nguva refu yekutsigirwa) senge RHEL, Debian, Ubuntu, Linux Mint, SUSE pakati pevamwe.
Vachamanikidzwa kuendesa zvisiri pamutemo shanduro dzisimo yechinyakare, chiteshi chebug uye zvigadziriso zvekuzvidzivirira pachavo, kana kugara vachidzokorora kune akakosha mavhezheni eQt, izvo zvingangoita sezvo zvichikonzera nyaya dzisingatarisirwi muzvishandiso zveQt zvakapihwa mukuparadzira. » »
Pane kumira kwakazara uko.
Yakaburitsa vhezheni nyowani yeLibreOffice 6.4 uye aya ndidzo shanduko